खेलकुद::आर एम खबर
यसकारण युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिएन _पुरा पढ्नुहोस्
२८ साउन, काठमाडौं । युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । उनले क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जान अमेरिकाको भिसा आवेदन दिएका थिए । तर, दूतावासले अस्वीकार गरेको छ । आफूले आवश्यक सबै कागजपत्र पेश गर्दा पनि भिसा नपाएको सन्दीपको गुनासो छ । सन्दीपका म्यानेजर रमन सिवाकोटीकाअनुसार लिगका खेलहरु विभिन्न शहरमा हुने भएकाले अमेरिकी भिसा हुँदा आउजाउ गर्न सहज हुन्थ्यो । साथै दोस्रो चरणका...
पाल्पाली सेवा समाज कतारद्वारा भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न , स्याङ्गजा (बी) टिम प्रथम
अर्जुन पौडेल l दोहा ,कतार , पाल्पाली सेवा समाज कतारद्वारा जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ ।ईस्लाम धर्मवलम्बि हरुकाे पबित्र पर्व ईद उल फित्र काे अवसरमा र आफ्नो सस्थाको साधारण सभाको अवसर परेर पाल्पाली सेवा समाज कतारले जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको हो l । खेल सनैया 52 लेफ्टसाईडमा रहेकाे भलिबल मैदानमा ३ जुन 201९ साँझ उद्घाटन भएको थियो l उद्घाटन सत्र लगत्तै आया्जना...
मेस्सी चम्किए, गोल नै गोलको वर्षा
एजेन्सी । लियोनल मेस्सी चम्किएको खेलमा अर्जेन्टिनाले मैत्रीपुर्ण खेलमा गोल बर्षा गरेको छ । शनिबार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले निकारागुआलाई ५–१ गोल अन्तरले हराएको हो । कोपा अमेरिकाको तयारी स्वरुप खेलिएको मैत्रीपुर्ण खेलमा लियोनल मेस्सीले दुई गोल गरे । दुई मिनेटको अन्तरमा दुई गोल गर्दै मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई शानदार सुरुवात दिएका थिए । लुटारो मार्टिनेजले समेत अर्जेन्टिनाका लागि दुई गोल थपे । ३७ औ मिनेटमा पहिलो गोल...
कतारको तारे होटलमा नेपाली दोहोरी साँझ संचालन हुदै ,पहिलो दिनमा विषेश छुट ।
करिम बक्स मियाँ, दोहा । आगमी ईदको अबसर पारेर कतारमा दाहोरी साँझ संचालनमा आउने भएको छ ।दोहाको ओल्ड सलाता स्थित बेस्ट वेस्टर्न होटलको १४ तल्लामा आगामी ५ जुनमा “आसियाना दोहोरी एण्ड गजल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार“ सन्चालन हुने भएको हो । गैर आवासीय नेपाली संघका मध्यपुर्व सह–संयोजक तथा व्यावसायी प्रविण गुरुङ्ग तथा उहाँकी धर्मपत्नी सरिताको लगानीमा उक्त दोहोरी एण्ड गजल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार कतारमा...
काठमाडौं – एशिया कप २०१८ मा भारत र पाकिस्तानबीचको खेलमा दर्शक दीर्घामा देखिएर भाइरल भएकी पाकिस्तानी सुन्दरी पुनः चर्चामा छिन् । त्यतिबेला निकै भाइरल भएकी यी युवती अहिले पुनः चर्चामा आउनुको कारण हो हिजो बेलुका भएको खेल । हिजोको खेल लाहोर कलन्दर्स र मुल्तान सुल्तानबीच भएको थियो । नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने पनि यो खेल खेल्दै थिए । यो खेलमा पनि ती सुन्दरी दर्शक दीर्घामा...
दीपेन्द्र र पवन बने नायक नेपालको शानदार जित, युएई चार विकेटले पराजित
काठमाडौं । टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल विजयी भएको छ । नेपालले युएईलाई चार विकेटले हराएको हो । यूएईले दिएको १०८ रनको चुनौती पछ्याएको नेपालले १९.३ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर भेट्याएको हो । नेपाललाई जिताउन दीपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक ४७ रन जोड्दै अविजित रहे भने करण केसीले २० रन बनाएका थिए । पवन १८ रन बनाएर आउट भए । यसअघि आईसीसी क्रिकेट एकेडेमीमा...
नेपाललाई अहिले सम्मकै ठुलो झट्का २५ रनमा आउट भए कप्तान खड्का, यस्तो छ ताजा स्थिति !
१७ माघ, काठमाडौं । पहिलो टी-२० म्याचमा यूएईले नेपाललाई १५४ रनको लक्ष्य पाएको नेपालको पहिलो चौथो गुमेको छ नेपालका पारस खड्का २५ रनमा आउट भए अहिले क्रिजमा सन्दिप जोरा र रोहित पौडेल रहेका छन चालु अबस्थामा नेपाल ४ विकेटको क्षतिमा ८ ओवर खेल्दै ४८ रन बनाएको छ आईसीसी क्रिकेट एकेडेमीमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको...
न्यूजिल्याण्डविरूद्ध भारतको लज्जास्पद पराजय
न्यूजिल्याण्ड भ्रमणमा रहेको भारतले घरेलु टोलीसँग लज्जास्पद पराजय ब्यहोरेको छ। पाँच मध्ये तीन खेलमा पराजित हुँदै यसअघिनै सिरिज गुमाइसकेको न्यूजिल्याण्डले चौथो खेलमा भारतमाथि ८ विकेटको सानदार जित निकाल्दै शृंखला ३–१ मा ल्याएको हो। भारतले दिएको ९३ रनको सामान्य लक्ष्य न्यूजिल्याण्डले १४.४ ओभरमा मात्र दुई विकेट गुमाएर पुरा गर्‍यो। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले ३०.५ ओभरमा ९२ रन बनाएर अल आउट भयो। नियमति कप्तान...
आज नेपाल अर्को इतिहास रच्ने तयारी : यूएईबीच पहिलो टी-२० खेल हुँदै, नेपालले आजको खेल जितोस भन्ने चाह्नुहुन्छ भने पुरा पढ्नुहोस र सक्दो सियर गरौ !!!
काठमाडौँ । आज संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को भ्रमणमा रहेको नेपालले पहिलो टी-२० खेल खेल्ने भएको छ। नेपाल यूएईबीचको खेल आज दिउँसो नेपाली समयानुसार पौने तीन बजे दुबईस्थित आईसीसी ग्लोबल क्रिकेट एकेडेमी मैदानमा हुँदैछ । जुन मैदानमा नेपालले ऐतिहासिक एकदिवसीय सिरिज जितेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय (ओडिआई) को मान्यता दिएपछिको दोस्रो द्विपक्षीय सिरिज जितेर विश्वक्रिकेटमा सनसनी मच्चाएको नेपालले आज टी ट्वान्टी सिरिज...
विश्वसामु नेपाललाई चिनाउने ५ खेलाडि…. उनिहरुको सम्मान स्वरुप १/१ सेयर गरौं
हाम्रो हरेक समाजमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरूमा विभिन्न खेलप्रति रूचि रहेको हुन्छ । खेलकुदले मान्छे मान्छेबीच सामूहिक भावनाको विकास गराउनुका साथै आपसी प्रतिस्पर्धाको भावना जगाउँछ । खेलकुदले एकातिर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गराउँछ भने अर्कातिर आपसी भाइचाराको भाव जगाउँछ । नेपालमा राम्रो प्रतिभा, क्षमता हुँदा हुँदै पनि अवसरको अभावमा ती प्रतिभाहरू दबिएर ओझेलमा परिरहेका हुन्छन् । गाँउ घरमा लुकेका कयाैं प्रतिभाहरू अवसरको कमिले गर्दा आझेलमा परिरहेका...